Mibebaha ianareo ary minoa ny Evanjely
Aza matahotra izay mamono ny vatana
Sabotsy 11 jolay 2020 — Herinandro faha-14 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 10, 24-33 — Sambatra ianareo mitana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fo tsara sy mahitsy, ka mitandrina azy sy mamoa amin'ny faharetana.
Tsy ianareo no hiteny... (Tenin'ny Tompo) 10/07/2020 04:00
Masindahy Augustin Zhao Rong (Kintan'ny finoana) 09/07/2020 06:30
Nahazo maimaim-poana ianareo... (Tenin'ny Tompo) 09/07/2020 04:00
Masindahy Thibaut de Marly (Kintan'ny finoana) 08/07/2020 06:30
Mankanesa any amin'ny ondry very... (Tenin'ny Tompo) 08/07/2020 04:00
Naseho ny : 13 janoary 2020
Alatsinainy 13 janoary 2020 — Herinandro voalohany mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Marka 1, 14-20 — Sambatra ireo mitana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fo tsara sy mahitsy, ka mitandrina azy sy mamoa amin'ny faharetana.
Asam-pamonjena nataon'i Jesoa Kristy tety an-tany ny hitory ny Evanjelin'ny Fanjakan'Andriamanitra. Votoatin'ny fitoriana ny Fanjakan'Andriamanitra ny fifbebahana sy ny finoana ny Evanjely. Ny fibebahana no toetra voalohany takiana amin'ireo handray ny Fanjakan'Andriamanitra, izany hoe toetra vonona hiova, dia ilay fiovana anaty ka hiala amin'ny toe-piainana ratsy sy tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary ny fahavononana hitafy fiainam-baovao.
Fanjakan'ny fahamarinana sy ny fitiavana no mandrafitra ny Fanjakan'Andriamanitra. Niantso olona àry i Jesoa hifanampy aminy sy ho iraka amin'ny fanitarana io Fanjakana io. Olona eny am-perin'asa, eny am-pitadiavana fivelomana amin'ny fiainana andavan'andro no nantsoiny: mpanarato. Asa efa manavanana ireto nantsoiny voalohany ho mpianany ireto ny fanaratoana; koa tsy ho trondro intsony no ho aratoina fa olona. Efa tsinjo amin'izany ny hiorenan'ny Fiangonana, izay arato hanangonana ny olona rehetra hovonjena. Olona tsotra afaka hitondra ny Vaovao Mahafaly ka hampibebaka ny olona no nantsoiny.
Misy ireo antsoin'Andriamanitra manokana amin'izao androntsika izao ao amin'ny Fiangonana, ao ireo pretra sy relijiozy. Eo koa anefa ireo antsoina ho lahika mpikatroka, afaka mitory ny Evanjelin'ny Fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fandraisana andraikitra izay sahanina ao amin'ny Fiangonana. Ny tanjona dia ny Fiangonana Fiombonana, sehatra hitoriana ny Vaovao Mahafaly, hitoriana ny Fanjakan'Andriamanitra; hitondrana famonjena ho an'izao tontolo izao.
Koa tsy ny fitoriana amin'ny teny ihany no handraisantsika ny adidy ao amin'ny Fiangonana fa amin'ny asa ihany koa. Na ny teny, na ny asa dia samy endrika hanehoantsika ny fanitarana ny Fanjakan'Andriamanitra.